प्रचण्डकाे दस्तावेजमा दाङका विश्वराज आचार्यकाे ३४ बुँदे सुझाव - Himali Patrika	प्रचण्डकाे दस्तावेजमा दाङका विश्वराज आचार्यकाे ३४ बुँदे सुझाव - Himali Patrika
ऐतिहासिक दस्तावेज माथि आवश्यक सुझाव
१. ऐतिहासिक आठौं महाधिवेशनमा श्रद्धय अध्यक्ष कमरेडबाट प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन माओवादी आन्दोलनको बैचारिक संश्लेषणको उच्चतम अभिव्यक्तिको रुपमा आएको छ । माओवादी धाराको विकास आन्दोलन नेतृत्व र सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बिचार श्रृंखला ‘प्रचण्डपथ’ को निरन्तरता (विकास चरण) को रुपमा यस दस्तावेजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । मैले प्रारम्भिक सुझाव र प्रतिकृया निम्नाअनुसार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
क) व्यवस्थापकीय पाटो
१) अध्यक्ष कमरेडको स्पिडलाई बुझ्न र गूण गर्न सक्ने स्तरको नेतृत्वको टिम बन्न नसकेर हो कि महाधिवेशनमा प्रस्तुत बिचारकोस्तर र महाधिवेशनको व्यवस्थापनकोस्तरमा तादाम्यता मिलेको देखिएन् ।
२) गु्रप विभाजनमा आयोजकको मेहनत शुन्य बराबर देखियो । महाधिवेशनमा सबै क्षेत्रका कमरेडहरुसँग राजनैतिक, बैचारिक र भौतिक अन्तर घुल्य हुने अवसरबाट प्रतिनिधि वञ्चित भयौं भने स्थानीय अन्तरबिरोधले बिचार माथिको सघन छलफलाई प्रभावित पार्ने प्रवल सम्भावना देखियो ।
मैले प्रदेशको गु्रप विभाजनमा भए पनि १२ जिल्लाका कमरेड दुबै गु्रपमा पर्ने गरी विभाजन गर्ने प्रस्ताव राखे तर, जितहारको संज्ञा दिन व्यवहारीक र उ उपर्युक्त प्रस्ताव लत्याईयो । नेतृत्वलाई ठिक लाग्दा लाग्दै पनि उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयन हुन सकेन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने व्यक्तिगत इगो, स्थानीय अन्तरबिरोधले बिचारको बहशमा प्रभाव पार्ने छ । अतः गु्रप विभाजन वैज्ञानिक विधिले हुन सकेन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
३) सबै आयोजकहरुलाई उपसमिति बनाई । ठोस जिम्मेवारी दिएको भए महाधिवेशनको अपनत्व ग्रहण गर्ने अवसर र सबै क्षेत्रमा परिचालन हुँदा व्यवस्थापनमा सहज र पूर्णता हुने थियो ।
४) अनुगमनको अभावमा व्यवस्थापकीय परिणाममुखी कार्य व्यवस्थापन भन्दा प्रदर्शनमुखी कार्यशैलीका कारण प्रतिनिधिहरुले व्यवस्थित महशुस गर्न पाएनौं ।
ख) राजनैतिक प्रतिवेदन बारे
अ) रुप पक्षको टीप्पणी सुझाव
१) महान जनयुद्धको प्रथम शहीद तथा महत्वपूर्ण (नेतृत्व) शहीदहरुको नम उल्लेखगरी श्रद्धाञ्जली च्याप्टर अलग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
२) मधेश आन्दोलन मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने कार्यहरुको रुपमा स्वीकार र व्याख्या गरेको हो कि रणनैतिक र सैद्धान्तिक रुपमा नै हामी माओवादीहरुले आत्मसाथ गरेका हौं । स्पष्ट हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो ।
३) उट्पट्याङ गैर कम्युनिष्ट चरित्रको केपी वली प्रवृत्तिलाई व्यक्त गर्दा वली प्रवृत्ति मात्र भन्दा कुनै जातलाई निषेधको भावनालाई चोट पुग्ने हुँदा केपी प्रवृत्ति भनि उल्लेख गर्दा उपर्युक्त हुने छ ।
४) कतिपय परम्परागत धार्मिक शब्दहरु प्रयोग गर्दा त्यही कुप्रचारको अवसर पाउने हुँदा ध्यानम धनकुबेर लगायतका शब्दहरुमा अन्य शब्द उल्लेख गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।
५) संगठनमा देखिएको अराजकता, तर्दथवाद र निराशालाई विधिबतरुपमा हल गरी राजनैतिक सैद्धान्तिक उर्जासँग सांगठनिक पहल लिन आवश्यक छ । सम्मेलन भएका महिनौं हुँदासम्म कतिपय प्रदेश, जनसंगठनहरुको पदाधिकारी टुंगो नलाग्नु विडम्वनापूर्ण छ । यस वारे नेतृत्वले समयमै पहल लिन आवश्यक छ ।
आ) प्रचण्डपथको निरन्तर विकास
बिचार संश्लेषणको ऐतिहासिक मोडमा हामी छौं । हिजो सबै विषय आन्दोलनको उर्जाकोरुपमा व्यक्त हुने गर्दथ्यो । प्रचण्डपथ युद्धको राजनैतिक, बैचारिक उर्जा थियो । आज प्रचण्डपथको विकशितरुपमा तथा स्तरमा बिचार संश्लेषण गर्न आवश्यक छ । हिजोको प्रचण्डपथलाई आजको आवश्यकता अनुरुप थप परिमार्जन र विकशित गर्दै लैजानु हामी क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो ।
‘वैज्ञानिक समाजवादको नेपाली बाटो’ नाममा बिचारलाई संश्लेषण गर्दा उपयुक्त सुझाव दिन चाहन्छु । अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा घटाउनुपर्ने कुनै विषय छैनन् । तर, थप्दा उपर्युक्त हुने विषय सुझावको रुपमा पेस गर्न चाहन्छु ।
१) हामीले हाम्रो पार्टीको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दा, नेपालको समग्र समस्या समाधानको महसुश नेपाली जनताले गर्ने स्तरको हुनुपर्दछ । कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा बाँहेक सम्पूर्ण कार्यकर्ता जसरी उत्साहित भएका छौं । तयही स्तरमै जनसमुदाय उत्साहित हुने विषयलाई उठान गर्न आवश्यक छ । तव मात्र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिने छ ।
२) राजनैतिक दलको हैसियत जनताको सहयोगमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने भएको हुँदा हामीले देश र जनताका समस्या समाधानका साथै उत्साति र सहभागी बनाउने नीति समावेश गर्नुपर्दछ ।
३) माओवादीको विदेश नीति के हुने ? राजनैतिक रुपमा स्पष्ट विवेचनासँगै नजस्तरमा बुझ्ने गरी नीति प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
४) विकशित देश र अल्पविकशित, विकाशाउन्मुख देशको अन्तर विरोध परिचालन गर्ने आधारभूत नीतिगत कार्यक्रम दिन आवश्यक छ ।
५) पुजिपति शोषणको नयाँ रुपाको व्याख्या अव्वल मथिलङ रन्थनिन गरी भएको छ । पुजि–उत्पादन–पुजि अनि मात्र मुनाफाको सिद्धन्तलाई जनस्तरमा बुझ्ने गरी थप व्याख्याको आवश्यक छ । साम्राज्यवादी एकाधिकार पुजिको विरुद्धमा अवलम्वन गरिने मौद्रीक नीति, पुजिबजार नीति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सगम्र बहशलाई नेपाली धितोपत्र बोर्डसँग जोडेर केही मुट्ठीभर दलाल पुजिपतिले अर्वौ मुनाफा लिएको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो पार्टीले नेपाली धितोपत्र वोर्ड वारे स्पष्ट धारणा राख्न आवश्यक छ ।
६) समाजिक सुरक्षा नीति वारे हाम्रो पार्टीको धारणालाई हामीले यस दस्तावेजमा उल्लेख गर्द आवश्यक छ ।
७) नेपाली सुरक्षा नीति, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र अनुसन्धान विभाग वारे हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा र योजना दस्तावेजमा उल्लेख गर्दा युद्धकाल देखि रहि आएका केही असमझदारीहरु हट्दै जाने र नयाँ पहलकदमी आउने छ ।
८) कर्मचारी परिचालन नीति र हाम्रो अवधारणा यस दस्तावेजमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । तलवका आधारमा चन्दा उठाएको ह्याङ ओभरविरोधीको भ्रम अझै कतिपय ठाउँमा कायमै छ ।
९) भुमिसुधार र भुमि व्यवस्थापन बारे हाम्रो पार्टीको स्पष्ट नीतिलाई थोरै भए पनि उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
१०) आयात प्रतिस्थापन र निर्या वृद्धि गर्ने नेपाली उत्पादन बढाउने र प्रयोग गर्ने नीति प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
११) कृति उत्पादन बृद्धि र प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत अवधारणा थोरै भए पनि उल्लेख गर्दा राम्रो हुने छ । कृषि प्रधान वारे बोल्न आवश्यक छ ।
१२) मजदुरहरुको श्रमको उचित ज्याला, सुरक्षा वारे उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
१३) राष्ट्रिय पुजिको विकास गर्न उद्योग नीति बनाई उतपादनमा जोडेर प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्द छ ।
१४) उर्जा, जलस्रोतलाई जनसहभागिता बनाउँदै सिचाईलाई व्यवस्थित गर्न र उर्जालाई आर्जनसँग जोड्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।
१५) गैर आवासीय नेपालीहरुको पुजि, सीप र अनुभवलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक छ ।
१६) वैदेशिक रोजगार वाध्यता भएको र समाधानका पहलहरु बारे थोरै उल्लेख गर्दा उपर्युक्त देखिन्छ ।
१७) आयात र व्यापारमा कर र भञ्सार असुलियमा टिकेको वर्तमान अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्दै समाजवादउन्मुख बनाउन व्यापार नीति वारे दस्तावेजमा बोल्न आवश्यक छ ।
१८) हिजो सञ्चालित जनसरकारले लिएको पर्यटन नीतिल तत्कालिन आवश्यकता केही हदसम्म पुरा गरेको र हालसम्म केही भ्रम यथाबत रहेको हुँदा हाम्रो पार्टीको वर्तमान पर्यटन नीति उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
१९) आन्दोलनको चरणमा उठाएका शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धि मुद्धालाई समयसापेक्ष र क्रान्तिकारी बनाइराख्ने हाम्रो पार्टीले अवलम्वन गर्ने शिक्षा नीति र स्वास्थ्य नीतिको सैद्धान्तिक र नीतिगत अवधारणा छोटोमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
२०) धर्म संस्कृति बारे हाम्रो पार्टीको धारणा संभवसम्म उल्लेख गर्न आवश्यक छ । हिजो हाम्रो कार्यशैलीमा देखिएका समस्याले पारेको प्रभाव र वर्तमान हाम्रो स्खलित आस्थाहरुले पारेको भ्रमले कार्यकर्ता र जनस्तरमा ठूलो भ्रम परेको छ । पार्टी पंक्तिमा यस बारे आधारभूत बुझाई हुन आवश्यक छ ।
२१) वर्तमानमा निकै चर्चामा रहेको सर्वोच्च अदालत छ । न्यायपालिका बारे हाम्रो सैद्धान्तिक अवधारणा दस्तावेजमा उल्लेख गर्न सान्र्धभिक हुने छ । साथै सर्वसाधारणलाई न्यायमा सहज पँहुच हुने गरी व्यवस्थापनको विषय उठाउन आवश्यक छ ।
२२) सबैभन्दा बढी मानव शोषण गर्नेहरुबाटै मावन अधिकारको प्रचार गरिने वर्तमान अवस्थामा वास्तविक रुपमा मानव अधिकरा के हो ? र कसरी पालना गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।
२३) जननियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार सुद्धिकरणको आधारको रुपमा गरिएको व्याख्यालाई नयाँ परिस्थितिमा थप परिमार्जन सहित यस दस्तावेजमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकार र पार्टी बिचको अन्तरविरोध, जनता र पार्टी बीचको अन्तरविरोध, कार्यकर्ता र नेता बीचको अन्तरबिरोध पहिचान र समाधानको उपाय सहितको व्याख्या आवश्यक छ । त्यसो गरेर मात्र प्रचण्डपथको विकशित बिचारको रुपमा यस दस्तावेजलाई लिन सकिन्छ ।
२४) अन्तरराष्ट्रिय भाइचाराहरुसँगको सम्बन्ध, सम्पर्कको विकास र विस्तारमा जोड दिन आवश्यक छ ।
२५) कुटनौटिक मर्यादा कायम गर्दै राष्ट्रियताका बारे केपीले पारको भ्रम चिर्दै वास्तविक राष्ट्रवादी माओवादी नै हो भनि जनतालाई स्पष्ट पार्न, भुमि अतिक्रमण र सीमा विवाद, एमसीसी लगायत वैदेशिक हस्तक्षप बारे बोल्न आवश्यक छ ।
२६) बिचारले कार्यक्रम जन्माउछ भने संगठनले कार्यान्वयन गर्द छ । बिचार अनुसार संगठन हुन सकेन भने बिचार निस्प्रभावित हुन्छ । त्यसैले संगठन सुधारको स्पष्ट अवधारणा यसै दस्तावेजमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । अनुगमन, निर्देशनलाई व्यवस्थित गर्ने । कमिटीको निर्णयको आधारमा भएका सिफारिसलाई मान्यता दिने परिपाटीको विकास गर्ने । कमिटीमा स्वच्छ बहस र प्रतिस्पर्धाको विधिको विकास गर्ने, जिम्मेवारी पाउनेले मनोमानि गर्ने र नपाउनेले उच्छृङ्कल आलोचना गर्ने सबै प्रकारका केनद्र देखि सेल सम्मका सांगठनिक अराजकतालाई निरुत्साहित र निस्तेज गर्ने नीतिगत अवधारणा गराउन आवश्यक छ ।
२८) बलिदानलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न यस महाधिवेशनले नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ । शहीद परिवार, घाइतेहरुलाई पार्टी कमिटीले गर्ने व्यवहार सफलता मापकको सुचि बनाईनुपर्द छ ।
२९) जनयुद्धमा सबै प्रकारका सहयोग गरेका जनसमुदायलाई सम्मान सहित अभिलेखिकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
३०) निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तनै कम्युनिष्टको आधारभूत सिद्धान्त हो । संघर्ष र सम्झौता गर्दा पनि यस सिद्धान्तलाई दह्रो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्द छ । समय रहँदै संघर्ष र समय रहँदै सम्झौताको महतव हुने गर्द छ । समय सकिए पछिको सम्झौताको पनि र संघर्षको पनि खासै अर्थ रहँदैन । यस बारे संगठित छलफल र निष्कर्ष हरेक कमिटीमा अनिवार्य हुने गर्द छ ।
३१) बिहानीले सिंगो दिनको झल्को दिन्छ भने जस्तै महाधिवेशनबाट बिचारसँगै संगठनको पूर्ण रुपमा दिन आवश्यक छ । विगत हेर्दा प्रदेश सम्मेलनले अझैसम्म पूर्णता पाएको छैन । यस महाधिवेशनका सम्पूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेर सम्पूर्ण उत्साह अभिव्यक्त गर्न आवश्यक छ । अधुरो अपुरो टुंग्याउने, स्थगित गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु हुन आयोजकलाई अनुरोध छ ।
३२) प्रत्यक्ष निर्वाचित बढीमा ११ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नु सान्र्धविक हुने छ ।
३३) एक व्यक्ति बढीमा दुई पटक सम्म पार्टीको एउटा पदमा उम्मेदवार र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३४) मनोनित (पार्टी, सरकार) हुनेहरु पनि एउटा पदमा बढीमा दुई पटक मात्र हुने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
माथि उल्लेखित प्रारम्भिक सुझावहरु हुन् । एक पटक सरसर्ति पढेको सुनेर गरिएको सुझाव र प्रतिकृया असान्र्दभिक हुन सक्छ । मेरा सुझाव र सयौं कार्यकर्ताको जायज सुझावलाई समावेश गरी यस दस्तावेजलाई ‘वैज्ञानिक समाजवादको नेपाली बाटो’ नामाकरण गरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिचार, संश्लेषण प्रचण्डपथको उच्चतमरुपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्द छ भन्ने मुल सुझाव पेस गर्न चाहन्छु ।
विश्वराज आचार्य, दाङ